May « 2012 « lunnsetnoemyat
ဒီလို လေတိုက်တာကို ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နေကျပဲ။ မိုးမရွာခင်မှာ ဒီလေမျိုးဟာ တိုက်နေကျ။ မိုးရွာလာတော့ လည်း လေက အရှိန်လျော့သွားတာပဲမဟုတ်လား။ ဆိုးရွားတာက ဒီနေ့တိုက်တဲ့ လေကတော့ အဲသလို မဟုတ်ဘူးရယ်။ သိပ်ကြမ်းလွန်းတယ်။ ကျွန်တော့်အပေါ် ထပ်တွေနဲ့ အောက်ထပ်တိုက်ခန်းတွေကတော့ စောစောပိုင်း လေစတိုက်ကတည်းက သူ တို့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်ကြပြီးပြီ။ လူမနေတဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်က အခန်းပြ တင်းတွေဆီကနေ တဒုန်းဒုန်းဆောင့်နေတဲ့ အသံတွေကို ဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်။ အစကတော့ ကျွန်တော့်အခန်းပြတင်းတွေကို မပိတ်ဘဲ ထားဦးမလို့ပဲ။ ကျွန်တော့်ပြတင်းတွေက မပိတ်ပေ မယ့်လို့ ဂျိတ်သေချာချိတ်ထားတော့ ဘာသံမှမထွက်ကြဘူး။ နောက်တော့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြော င်းသွားတယ်။ ခြင်ထောင်တစ်ခုလုံး လွင့်နေအောင် တိုက်တဲ့ လေကို အမြင်ကတ်သွားတာ လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်လဲလျောင်းနေတဲ့ အခန်းထဲက ပြတင်းတံခါးနှစ်ချပ်ကို ထပိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ပြတင်းတွေကို လိုက်ပိတ်တယ်။ အဲသလိုလိုက်ပိတ်နေတုန်း ဟိုးခပ်ဝေးဝေးက တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ ပြတင်းပေါက် တစ်ခုဆီ အမှတ်မထင် ကျွန်တော့်အကြည့်ရောက်မိသွား တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ။ သူက ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူကြည့်နေပုံက ကျွန်တော့်လိုပဲ အမှတ်မထင် တွေ့သွား ပုံကြောင့်လို့ မထင်ဘူး။ ပြတင်းပေါက်ဆီ သေချာပေါက်ရောက်လာမယ့် ကျွန်တော့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းကတည်းက တင်ကြိုစောင့် ကြည့်နေပုံမျိုး။ ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကတည်း က စောင့်ကြည့်နေပုံမျိုးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲသလို ထင်လိုက်မိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် ရှင်းမပြတတ်ဘူး။ သေချာတာက သူ့အကြည့်က တပ်အပ်ပိုင်နိုင်လွန်းနေခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။ သူ ကြည့်နေတဲ့ ပြတင်းကတော့ လေဒဏ် မိုးဒဏ်တွေ ကင်းလွတ်လို့နေရဲ့။ သူ့ကို ပြန်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သူဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ။ ဒါထက်မပိုဘူး။ သူ့အသားဖြူသလား။ မည်းသလား။ သူဘယ်အသက် အရွယ်လဲ။ ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်လား။ ပုံပျက်ပန်းပျက်လား။ စိတ်ဓာတ်ကရော ဘယ်လိုလဲ။ ထက်မြက်လား။ တော်ရိလျော်ရိလား။ အိမ်ထောင်ရှိသူလား။ မရှိသူလား။ ရုပ်ရည် ကရောကြည့်ကောင်းလား။ အသင့်အတင့်ပဲလား။ ကျွန်တော်ဘာမှ မသိဘူး။ သူဟာ မိန်းမတ စ်ယောက်ဆိုတာကလွဲရင် ဘာဆိုဘာမှ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းခံစားလို့မရဘူး။ မိုးစက်အမှုန် အမွှားတွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် တစ်စက်နှစ်စက်လာပက်လို့ အဲဒီ့ပြတင်းတံခါးကို ကျွန်တော်ပိတ်ပစ်လိုက် တယ်။
မှန်ပြတင်းအပြင်ဖက်မှာ မိုးစက်တွေဟာ တဝေါဝေါထိုးစိုက်ရွာသွန်းနေတော့ အပြင်ဖက်ကို ကျွန်တော်သေချာမမြင်ရတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ဖြစ်နေတာ ကတော့ ပျောက်မသွားဘူးရယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်သောက်တယ်။ ကျွန်တော်အရင်က ၀ီစကီကြိုက်တယ်။ အခုလို မိုးအေးတဲ့ နေ့တွေမှာ ၀ီစကီတစ်ခွက် နဲ့ တောင်ေ တွးမြော က်တွေးလုပ်နေရတာကိုလည်း ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ကော်ဖီကိုပဲ သောက်နေမိတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လည်း ဝေခွဲမရဘူး။ အခုတလော ဒီလိုကိစ္စတွေ ကျွန်တော် မကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်ကိုယ့်ကျွန်တော့် မပြည့်မစုံဖြစ်နေသလိုတောင် ခံစားရတယ်။ ဥပမာ- ဟိုပစ္စည်း လှမ်းကိုင်ရင် မမိရတာနဲ့။ ဒီလှေကားထစ်ပေါ် လှမ်းတက်ရင် ခြေချော်ကျတာနဲ့။ ဒီနေ့မ နက်ကဆို တစ်မနက်လုံးလိုလို ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်နေ ခဲ့တယ်။ စက္ကူတွေက ဆီသုတ်ထားသလိုပဲ။ စာမျက်နှာတွေကို ကျွန်တော်လှန်လိုက်တဲ့အခါ လက်ထဲ အလွယ်တကူပါမလာဘဲ အကြိမ်အတော်များများမှာ ကပ် ကျန်နေတတ်တယ် ။ ကော်ဖီက တော်တော်ကောင်းတယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခွက်တောင် ကျွန်တော်ထပ်ဖျော်လိုက် တယ်။ ဒီမှာတင် ကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်ကြုံတယ်။ တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်ဗူးထဲက ရေတွေပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မပြောတတ်ဘူး။ ရေတွေက အေးနေတယ်။ အခုလေးတင် ပထမကော်ဖီကို ဒီဓာတ်ဗူးထဲက ရေနဲ့ ကျွန်တော်ဖျော်လိုက်တာ။ အငွေ့တထောင်းထာင်းထအောင် ပူနေ တဲ့ ရေတွေက ဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အေးသွားရတယ်လို့ပဲ။ မဖြစ်နိုင်တာ။ ခပ်တိုးတိုးရေရွတ် ရင်း ဓာတ်ဗူးကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် ကျွန်တော် မ ကြည့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သံသယဖြစ်လောက် စရာဘာမှမတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။
ဒုတိယကော်ဖီခွက်က ပထမကော်ဖီခွက်နဲ့ အရသာတော်တော်ကွာတယ်။ ကော်ဖီမှုန့်တစ်ချို့က ခွက်ထဲမှာ ပေါ လောမျောနေတယ်။ သကြားတွေကလည်း ကောင်းကောင်းအရည်မပျော်ဘူး။ ဒီလိုမှန်းသိရင် နောက်တစ်ခွက်ကို ထပ်မဖျော် ဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ မသိမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အစဉ်အမြဲငွေ့ရည်ဖွဲ့နေတတ်ကြတာမျိုးပဲ။ အခန်းပြတင်းတံခါးတွေ အားလုံးပိတ်ထားတာတောင် ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အေးစက်နေတယ်။ နောက်ပြီး ခုလိုထိုင်နေ ရတာနဲ့တင် ကျွန်တော့်မှာ အားအင်တွေ ခမ်းခြောက်လာသလိုလည်း ခံစားမိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကော် ဖီခွက်ကို ချခဲ့ပြီး အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်သွားလှဲလိုက်တယ်။ မှေးခနဲအိပ်ပျော် သွားတော့ ကျွန်တော် အိပ်မက်တွေမက်တယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ စောစောက ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြီး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းမပါလာတယ်။ ကျွန်တော့်အခန်းပြတင်းပေါက်တွေကလည်း ဟာလာ ဟင်းလင်း ပွင့်နေကြတယ်။ တံခါးတွေဟာ အချပ်လိုက် ပြုတ်ထွက်သွားပြီး ဟိုးအဝေးကြီးပြင် ပလေထုထဲဆီ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ကော်ဖီခွက် တစ်ခွက်ထဲမှာ ပေါလောမျောနေတဲ့ ကော်ဖီမှုန့်တွေနဲ့အတူ မောပန်းတကြီးကူးခတ်နေပြန်တယ်။ အိပ်မက်တွေက အစီအစဉ်မကျဘဲ ဗရမ်းဗတာနဲ့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေကြတာပဲ။ အိပ်ယာ က နိုး လာတော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပိုလို့တောင်မှ အေးစက်နေရဲ့။ အပြင်ဖက်မှာတော့ မိုးမ ရွာတော့ဘူးရယ်။ ဒါပေမယ့် နေလည်း ထွက်မလာဘူး။ အလင်းရောင်က နေပူမလိုလို မိုးရွာမလို လိုနဲ့ ကြားအခြေအနေထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အရောင်အဆင်းမျိုး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အဲဒီ့ထက်ပိုလင်း လာတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အဲဒီ့ထက် ပိုမှောင်သွားတတ်ပြန်ရော။ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ် က အလင်းရောင်ကို အဝေးထိန်းခလုတ်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က ကစားနေသလိုပဲလို့ ဥပမာပေး ရမယ်။ အခန်းပြတင်းတွေကို ကျွန်တော်လိုက်ဖွင့်မိပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က ခါတိုင်း ထက် အေးစက်ပြီး လေးလံနေတယ်။ ၀ီစကီမသောက်ရလို့ထင်ပါရဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့် ကို လှမ်းပြီး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းမနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြတင်းတံခါးကို ဖွင့်ဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး။ ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အင်မတန်လေး လံနေတယ်။ ပြတင်းတံခါးကို ကျွန်တော် အတော်လေးအားစိုက်ပြီး တွန်းဖွင့်လိုက်ရတယ်။ အိုး…။ ကျွန်တော်အံအားသင့်သွား တယ်။ ဟိုအဝေးမှာ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြီး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းမကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အ တွက်ကြောင့်ပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ ပထမအကြိမ်တုန်းကလိုတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။ သူဟာ ပထမအကြိမ် တုန်းကထက် ကျွန်တော်နဲ့ ပိုဝေးကွာနေသလို ခံစားရတယ်။ သူ့ရဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုက်ခန်းနှစ်ခုကြားက အကွာအဝေးဟာ ဘာဖြစ်လို့ ပိုမိုခြားနားသွားရတာလဲ။ ကျွန်တော်နားမ လည်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အဲသ လိုဝေးကွာသွားတာကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး။ သူ့ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အလိုလိုအားငယ်လာတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း တစ်ခုခုကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့ မလိုလို ဘာလိုလိုကြီးဖြစ်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကြောက်လာတယ်။
နည်းနည်းလေးကြာတော့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် ရေဒီယိုကို ကျွန်တော်သွားယူလိုက် တယ်။ ဒီနေ့ကျမှ ကျွန်တော်ဖမ်းချင်တဲ့ လိုင်းတွေကလည်း မမိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရေဒီယိုထဲကနေ အသံတွေက တကျွိကျွိတစိစိနဲ့ ထွက်လာ တယ်။ နားထောင်ရသိပ်ဆိုးတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်ဟာ ရေဒီယိုကို ဆက်ပြီးဖွင့်ထားမိတယ်။ အပေါ်ထပ်တွေနဲ့ အောက်ထပ်တိုက်ခန်းတွေ က ပြတင်းတံခါးပြန်ဖွင့်သံတွေ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ထွက်လာတယ်။ ဘယ်တော့မှ မပြီးဆုံးတော့သ လိုတောင် ထင်ရတယ်။ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ တကယ်တမ်း ကျတော့ ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ အခန်းတစ်ခုလုံးမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဘီယာဗူးခွံတွေနဲ့ စီးကရက်အတိုအစတွေကိုပဲ ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေ အခန်းထဲ ဘယ် လိုရောက်လာမှန်း ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျွန်တော်က ဘီယာနဲ့ စီးကရက်ကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေ မယ့်လို့ ဘီယာနဲ့ စီးကရက်ကြိုက်တဲ့ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းထဲ ကျွန်တော်ရောက်နေတာ လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ငန်းနှစ်ကောင်ရေကစားနေတဲ့ ပန်းချီကား ကတော့ ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားသလို အတိအကျရှိနေ တယ်။ လောလောဆယ် မှာတော့ ဒါတွေကို ကျွန်တော်ဆက်မတွေးချင်သေးဘူး။ ကျွန်တော်ဝီစကီတစ်ခွက် လောက်သောက်ချင်မိ တယ်။ အချိန်တွေက မြန်မြန် ဆန်ဆန်ပဲ ကုန်ဆုံးနေတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ တကျွိကျွိတစိစိမြည်သံတွေ ထွက်နေတဲ့ ရေဒီယိုကို ကျွန်တော်ပိတ်ပစ်ပြီး အခန်းထဲက ကုတင်ဆီ လျှောက်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ဖတ်လက်စစာအုပ်ကို ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲယူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် လက်တွေက စာအုပ်ဆီမရောက်ဘဲ လေကိုသာ ဖမ်းဆုပ်မိသွားရဲ့။ ကျွန်တော် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်လို့သွား တယ်။ စာအုပ်ကို နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲယူလိုက်တယ်။ ပါမလာပြန်ဘူး။ ကျွန်တော် ဘာကိုနားလည်ရမယ် မသိဖြစ်သွားတယ်။ ယောင်ယမ်းပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာရှေ့မှာ လက်ချောင်းတွေကို ထောင်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ ပလတ်စတစ်အကြည်နဲ့ လုပ်ထားသလိုပဲ။ အပေါ်က ခြင်ထောင်အမိုးကို ဒိုးယိုပေါက်မြင်လိုက်ရတယ်။ ရုတ်တရက် ကျွန်တော်ချောက်ချောက်ချားချားဖြစ်သွားရဲ့။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီအဖြစ်ဟာ စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲ ကြာ လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲ လက်တွေကို ပကတိအတိုင်း ကျွန်တော်ပြန်မြင်တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် တိတ်ဆိတ်သွားတယ် ။ ဒီလိုတိတ်ဆိတ်နေရတာမျိုးကို ကျွန်တော်မကြိုက်လှဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ဟာ တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်နေမိ တယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲကနေ မျက်ရည်တွေဟာ အတားအဆီးမဲ့ကျဆင်းလာတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြီး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းမကို သတိရလိုက်တယ်။ သူ့ကိုမြင်နိုင်တဲ့ ပြတင်း တံခါးဆီ သွားချင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အေးစက်ပြီး လေးလံနေတယ်။ ကျွန်တော်ရှိ ရာ ပြတင်းပေါက်ကို သူလှမ်း ပြီး စိုက်ကြည့်နေဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အချိန်အတော်ကြာတဲ့ ထိအောင်ပဲ ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ငိုကြွေးနေမိတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေ ကတော့ ပလတ်စတစ်မျက်ရည်တွေ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ။
၈.၈.၁၁ နံနက် ၀၁း၀၁နာရီ
Idea Magazine ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
ကျုပ်အထင်တော့ထောပတ်ခွက်များကခလေးငယ်တစ် ယောက်ရဲ့မေး အောက်မှတစ်ဆင့်
ကိုက်ခဲ၍ ထိုသစ်စေ့များက အနံ့မကောင်းတဲ့ သင့်လည်ချောင်းကအသားလွှာကဲ့သို့
( Yellow. Lizz Murphy ).
Double Room မှ